Ny tanànan'i Montreal
Montréal dia tanàna lehibe an'ny Québec any Kanada. Toerana anaovana varotra, taozava-baventy, kolontsaina, ny vola sy ny varotra iraisam-pirenena ilay tanàna. Nandray ny Fampisehoana Oniversaly tamin'ny 1967 sy ny Lalao olimpika 1976 iulay tanàna. Azontsika jerena ao koa ny festivalin'ny Filman'ny Tontolo ao Montréal, ny Festivaly Iraisam-pirenena ny Jazz ao Montréal, ny Festival ny Juste pour Rire, ny Festival Montréal en lumière ary ny klioba hockey ara-asa, ny Kanadianin'ny Montreal. Ny Vieux-Montréal (Montréal Antitra) dia voasokajy ao amin'ny fivondronan'ny tantara tamin'ny 1964.
Montréal dia tanàna fahaefatra miteny frantsay teny ofisialy eto an-tany eo aorian'ny Paris (11,77 tapitrisa mponina ho an'i Paris). Na dia misy tanàna afrikanina ohatran' Alger, Kinshasa sy Abidjan, mbola ngeza nohon' Montreal. Ny teny frantsay dia tsy lazaina fa tenin-dreny fa tenin'ny varotra sy ny fandraharahana ao Montréal. Izy irery ny tanàna lehibe miteny frantsay ao Amerika Avaratra. Izy koa, eo aorian'i Toronto, ny tanàna kanadianina ngeza indrindra.
Ny tanànan'i Montreal dia eo amin'ny nosy mitondra ny anarana mitovy amin'ny anaran-tanàna, eo amin'ny nosy ngeza indrindra an'ny tamba-nosy Hochelaga (482 km2) eo amin'ny sakeli-dranon'ny Saint-Laurent sy ny Rivière des Outaouais, any andrefan-tanàna.
((fr)) ((en)) Sehatra ofisialin'ny tanànan'i Montréal
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Montréal&oldid=977251"
Tanàna ao Kanada
Voaova farany tamin'ny 18 Novambra 2019 amin'ny 22:50 ity pejy ity.